Nzọụkwụ ọla edo maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị | ECommerce ozi ọma
Nzọụkwụ ọla edo maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
Taa, ọtụtụ ndị na-achọ bido azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetịHa na-achọ nkwụsi ike nke ahịa na obere ego. Azụmahịa anụ ahụ nke obodo, na-achọ mgbe niile mmefu, nke dugara ndị mmadụ iche banyere ecommerce, ma ọ bụ otu ụlọ ahịa ndị dị n'ịntanetị.
1 Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịmalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
1.1 Expmụbawanye ahịa gị ma nwee ihe mgbaru ọsọ
1.2 Nkọwa ma ọ bụ ahụmịhe onye ọrụ
1.4 Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa
Ihe ị kwesịrị ịma tupu ịmalite ụlọ ahịa dị n'ịntanetị
Expmụbawanye ahịa gị ma nwee ihe mgbaru ọsọ
Tupu ịmalite ecommerce na-aga nke ọma ị kwesịrị ịma Kedu ndị na-ege ntị ka ị ga-eresị?. Ọ bụ eziokwu na site na azụmaahịa eletrọniki ị ga-erute ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ, agbanyeghị ọ bụkwa eziokwu na ị ga-erute nnukwu ndị na-ege ntị na ngwaahịa gị enweghị mmasị.
Nkọwa ma ọ bụ ahụmịhe onye ọrụ
Ebe ọ bụ na ị gaghị enwe a ụlọ ahịa anụ ahụ na ndị ọrụ agaghị enwe ike ịbịakwute gị Iji chọpụta na ngwaahịa gị dị mma, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị zuru oke, ị ga-emerịrị ya dị ka ntụkwasị obi ma dị mfe dịka ị nwere ike, n'ụzọ ọ bụla onye ahịa nke batara na ibe gị hụrụ gị n'anya kpamkpam ngwaahịa.
Tupu imeghe ecommerce, ikwesiri iburu n'uche na 70% nke ndị mmadụ taa na-ejikọ site na ekwentị ha, nke na-eduga na imewe nke ebe nrụọrụ weebụ gị ga- na-eme ntanetị weebụ, ka ndị ahịa gị wee nwee ike jikọọ na ụlọ ahịa gị n'oge ọ bụla.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iche onwe gị na ndị asọmpi gị, otu n’ime ihe na-adabaghị n’ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ ọrụ ahịa, nke nwere ike iduga n'eziokwu na ọ bụrụ na ị nye ọrụ ọjọọ na nke mbụ ya, ị ga-atụfu onye ahịa ahụ ruo mgbe ebighị ebi.
Iku ọkachamara -enyere gị aka ime ka gị interface zuru okè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Nzọụkwụ ọla edo maka ụlọ ahịa gị n'ịntanetị
Ọ masịrị m ma enwere m ọtụtụ ndị ọzọ
Etu esi abawanye ahia na ecommerce
Teknụzụ ọchụchọ anya na ọgụgụ isi